Mermaids kunye noMtshakazi weGypsy. Ii-opera ezimbini ezimnyama eziluhlaza. | Uncwadi lwangoku
Mermaids kunye noMtshakazi weGypsy. Ii-opera ezimbini ezimnyama eziluhlaza.
IiSirenas y Umtshakazi ongumGypsy zimbini iinoveli ezimnyama ze uqikelelo olukhulu kwimeko yanamhlanje. Kwaye kuvela ukuba zimbini opera opera ophumeleleyo otyikitya isingesi UJoseph Knox y UCarmen Mola, i isibizo Umbhali (okanye umbhali) othe wamangalisa abagxeki belizwe kunye noluntu kakhulu. Ndizifunde nje kwaye ndibanike uphononongo.
Inyani yile yokuba kufuneka ndiwuthathile umnqwazi wam. Sonke esenza oko sibhalayo singathanda ukubona inoveli kwindawo yethu yokuqala kwaye, nayo, ukuba ipapashwe ngendlela enkulu, kodwa iphuma kuphela kwabanye. Imizekelo yokugqibela yeyababhali abathi, kwimisebenzi yabo emibini yokuqala, bawenzile umhlaba omnyama ngamabali amabini azo apho yonke into ibonakala ijikeleze: Ubume, isimbo, uyilo, idolo kunye neziphelo ezinamandla ezihlala zivulekile.
IiSirenas -UJoseph Knox
UJoseph Knox ukwiminyaka engamashumi amathathu ubudala, wazalelwa eManchester, kwaye wasebenza kwimivalo, kwiivenkile nakwiivenkile zeencwadi ngaphambi kokuba aye eLondon. Kunye IiSirenasNgamava akhe amaninzi kunye nokuqwalaselwa ngelixa esebenza kwezo ndawo, uyiphumelele okokuqala.
Kwaye usebenzise isitayile esihle (ebalisa umntu wokuqala ophambili ngumlinganiswa ophambili) kunye nabalinganiswa abalungileyo, ukusuka kwezona ziphambili ukuya kweziziisekondari. Kwakhona kulwakhiwo lwe iinxalenye kunye nezahluko ezimfutshane ezifundwayo zingayeki. Kule nto sidibanisa umoya omnyama njengengxelo (izitrato ezingwevu, ezirhabaxa kunye nezona ndawo zibolileyo kunye neendawo zaseManchester). Kwaye iyelenqe apho eyona X-reyi elukhuni yeyeza kunye nezilwanyana eziyingqongileyo kunye nefuthe lazo emfanekisweni zimfiliba njengoko zingenanceba okanye themba.
Ezi Mermaids, isihloko ekubhekiswa kuso amantombazana ahambisa iziyobisi kwezo ndawo Kwaye emva koko baya kuthatha imali eqokelelwe kubarhwebi abasemsebenzini. bazuze impumelelo eyiyo. Ngomva we-classic yohlobo, ngumsebenzi omkhulu mhlawumbi I-cryptic kwiincoko kwaye ikwachaza neenkcazo, kodwa eziyinxalenye ye- ukungazinzi kunye nemeko yengqondo yomlinganiswa ophambili kunye nabanye abalinganiswa.
Ndinqwenela, kwaye olu sele lulolona luvo lwam, ukuba umlinganiswa ophambili ngesele efikelele kum ngokunzulu, ebaluleke ngokukodwa xa ungena ebalini. Kodwa khange ndikwazi ukunxibelelana no-Aidan Uyalinda, kungene ipolisa elingenantlonelo ongaziyo ukuba ucinga ntoni ngalo, othembisa yonke into nawo wonke umntu, ophethe nembali yokuncothula iingcambu.
Khange ndikwazi ukunxibelelana kakuhle needemon zakhe kunye neziyobisi nangobudlelwane bakhe nabanye abalinganiswa. Mhlawumbi ibikule meko yokungaqiniseki nokungathembani eli bali liyayeka. Kodwa ilahleko okanye ukuthanda kwabo kuye kwahlala nam ngaphambi kokuba ndifike kwinto endiyifunayo kumlinganiswa oza kubetha. Nangona kunjalo wonke umfanekiso ufezekisa ibhalansi.
Kwaye elinye inqaku likwangumbali nje: ukuba ungumlandeli we Ingcingane ekulu kakhulu nokunqula umlinganiswa obalaseleyo wohlobo olufana noBud White (Imfihlo ye-LA, James Ellroy), ukuba enye yesibini, imbi ngaphezu kokubi, ibizwa ngokuba ngu-Sheldon White khange indincede ndikholelwe. Nangona kunjalo, ewe, ndincoma ibhafu elungileyo emnyama ngezi zinto IiSirenas.
UJoseph Knox sele esebenza kwinoveli yesibini, ke kuyakubakho u-Aidan Waits.
Umtshakazi ongumGypsy -Carmen Mola
UCarmen Mola ligama elisisidenge emva kombhali otyikitye ixesha lokuqala lokwenza ixesha kweyona ndawo imnyama yokubhala. Oko kudlala kakhulu kubo njengoko kunyusa ulindelo kunye nemfihlakalo. Ke sele unayo eyokuqala enkulu. Okwesibini kukudlulisa ngobuchule uloyiko, ukujija kunye nenkohlakalo kumacebo, iinkcukacha, abalinganiswa kunye neetempos esizifundele abanye ababhali abavela ngaphandle, kodwa hayi kakhulu kula macandelo.
Kukho ukubethwa, umzekelo, isiFrentshi uPierre Lemaitre okanye uFranck Thilliez i-creepier okanye i-british Mo hayder kuthotho lwakhe olumnyama lweJack Caffery kunye UDaniel cole nayo yakutshanje Unodoli we-RAG. Kwaye, uMola uququzelela iyelenqe eligqibeleleyo lokubulala oodade abancinci abangama-gypsy ngamaxesha ahlukeneyo kodwa iimeko ezifanayo.
Kwindawo ezikhokelwa yingxelo yeziganeko ezoyikekayo ezidlulileyo, Izahluko zexesha langoku zingaphezulu kwamaphepha amathathu ubude, nge amabinzana amafutshane kunye neenkcazo ezikhawulezayo oququzelela ukufundwa okukhawulezayo njengoko kulula. Kwaye iqela lamapolisa labalinganiswa njengoko libekiwe ngokufanelekileyo njengoko lisebenza, longezwa nge-protagonist, umhloli U-Elena Blanco, ngaphandle kwamathandabuzo enye impumelelo kula maxesha adumileyo ukuxhotyiswa kwabasetyhini.
Kodwa bonke bayila "isamente" yekwayara, kuba ngaphandle kwamathandabuzo indalo yabo ikwindawo yesinema ngokupheleleyo, Ayisiyiyo kuphela inkcazo kunye nokuziphatha kwabo, kodwa nakwisantya apho wonke umntu edibana kunye nesenzo. Ukongeza, nakwabo kuthi bahlala okanye bahlala bejikeleza iMadrid, ukubalandela kwimibuzo yabo kule dolophu indala okanye iindawo ezinqamlezileyo ezikwayimimandla yenye yeemvakalelo.
Impumelelo yokugqibela: isiphelo esothusayo, enye yezo zishiya umnyango uvulelekile ukuba woyike ngakumbi leyo ubungasacingi ukuba inokwenzeka emva kwale uyifundileyo. Ngamanye amagama, u-Elena Blanco kunye neqela lakhe lonke abacingi ukuba kuya kuthatha ixesha elide ukubuya. Kwaye ndibheja ukuba bazakugcina inqanaba elihle lokuqalisa kolu luhlu.
I-buts zam kuphela ezikhethekileyo, kunjalo. Kuncwadi andilithandi kakhulu ixesha endiphila kulo okanye izinto zemihla ngemihla zeli xesha okanye leli lizwe. Ke ndiziva ndibona umahluko phakathi kokulunga kwebali, ukulandwa kwayo kunye nabalinganiswa kunye nokuncinci okunditsalayo ukuba bahambe okanye babekho kwiindawo endizaziyo. Kwaye enye yeengxaki zam ezinkulu, ngaphandle kwamathandabuzo, ayilunganga kwezopolitiko kwezi ntsuku: ndingoyena mntu uphambili endodeni. Ndizakwenza ntoni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Mermaids kunye noMtshakazi weGypsy. Ii-opera ezimbini ezimnyama eziluhlaza.
UDH Lawrence. Umthandi kaLady Chatterley kwizivakalisi ezili-15.
UTerje Vigen, umbongo ongaziwayo kaHenrik Ibsen